सासूको खुट्टामा झुकेको बुहारीको नयाँ परिचय ! | Ratopati
personएन्जेल मञ्जरी exploreकाठमाडौं access_timeभदौ १, २०७८ chat_bubble_outline0
मेरो जीवनसाथी उनी पनि साधारण सरल, जे हो त्यहीमा आफ्नो धरातलमा उभिने मिहिनेती । हामी दुवैजना प्रेममा प¥यौँ र भेटेको दुई वर्षमा विवाह गर्ने निर्णय ग¥यौँ । विवाह यही मङ्सिरमा भयो ।
तर, मलाई त मेरो घरबाट तिमी महिला भएकै कारण निरीह छौ भनेर कहिल्यै सिकाउनुभएन । अन्याय सहनुपर्छ भन्नुभएन । के मेरा बुवाआमाले गलत सिकाउनुभएको हो भनेर यो समाजले भन्नुप¥यो । म आज यो समाजलाई सोध्न चाहन्छु ?
मेरो एकजना साथीले सुनाएको प्रसङ्ग सम्झन्छु । उनको सासूले प्रत्येक दिन बिहान सबैलाई टीका लगाइदिन्थिन् रे । मेरो साथी चाहिँ टीका लगाएपछि सासूको खुट्टा ढोग्नुपर्छ भनेर बिहानमा सधैँ यताउता आँखा छल्ने बहाना खोज्थिन् रे । कठै भन्न मन लाग्छ हामी महिलाको दयनीय अवस्था देखेर । आफ्ना कुरा एक महिला भएर अर्को महिलासँग गर्न नसक्ने । अनि त भन्छन् हामीलाई महिलाको शत्रु महिला भनेर । यो बुझ्नका लागि पितृसत्ता बुझ्नप¥यो । यसले कसरी महिलालाई निरीह बनाउँछ । त्यो बुझ्न प¥यो ।
महिलाको कुनै पनि घर हुन्न । त्यही भएर मेरो अहिलेसम्म घर र थर दुवै छैन । कुनै दिन घर बनाउन सकेँछु भने म जानकारी गराउनेछु । म मञ्जरी हुँ । मात्र आफ्नो दुनियाँमा आफ्नै लागि परी, एन्जेल मञ्जरी ।
इमानका सतिसाल, अर्थात पोष्टबहादुर बोगटी